देखाउन खप्पिस साम्राज्ञी ! – ताजा समाचार
देखाउन खप्पिस साम्राज्ञी !
साम्राज्ञीका नयाँ प्रेमी देवांश राणासँगको बालीको समुन्द्रमा खिचिएको फोटोले अहिले यही दायरा पार गरेको चर्चा छ। सार्वजनिक फोटोमा साम्राज्ञीलाई प्रेमीले आपत्तिजनक ठाउँमा अँगालेका छन् र मुखमुद्रा पूरै कामुक छ।
यी फोटा देवांशले आफ्नो इन्स्टा अकाउन्टबाट सार्वजनिक गरेका थिए। अघिल्लो वर्ष ‘कायरा’ रिलिजको समयमा पनि साम्राज्ञीको नितम्बको फोटो सार्वजनिक भएको थियो। नि!तम्बमा ट्याटू खोपेको बहादुरी देखाउन खोज्दा फोटो भाइरल भएको थियो। यतिबेला पनि साम्राज्ञी अभिनीत दुई फिल्म ‘मारुनी’ र ‘रातो टीका निधारमा’ रिलिजको सँघारमा छन्। ‘मारुनी’ भदौमा तीजको छेकोमा रिलिज हुँदै छ भने ‘रातो टीका निधारमा’ दशैँमा।
फेसबुक, इन्स्टामै सबै कुरा देखाइदिएपछि दर्शक फिल्ममा के हेर्न आउँछन्?
अभिनेत्री साम्राज्ञी शाहको फेरी अर्को तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । उनले प्रेमीसंग गाडीभित्र रोमान्स गरेको तस्विर सार्वजनिक भएको हो । फिल्मको सुटिगं सकेर इन्डोनेशियाको बालीमा आराम गर्न गएकी साम्राज्ञीका अन्तरंग तस्बिर बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् । केही तस्बिर भने उनले निकै आलोचना भएपछि सामाजिक सञ्जालवाट हटाएकी छन् ।तर सार्वजनिक हुनासाथ भाइरल भइसकेका उनका तस्बिरले अहिले पनि चर्चा पाइरहेका छन् ।